Geedka Dacarta waxtarkiisa iyo Daawada Loo Isticmaalo - BAARGAAL.NET
Geedka Dacarta waxtarkiisa iyo Daawada Loo Isticmaalo
✔ Admin on March 31, 2013
Waxa aan isku dayi-doonaa in aan bal wax ka taataabto dawooyinka dabiiciga.
Daawaynta xanuunada ama cudurada ayaa loo kal qaadaa laba qaybood oo kala ah mid kiimiko ka samaysan iyo mid lag sameeyo geedaha ama dhir dabiiciga ah.
Waxaa muddooyinka danbe soo badanaya isticmaalka la isticmaalo dawooyinka dabiiciga ee dhirta laga sameeyo Qormadan gaaban waxa aynu maanta ku eegi doonaa haddii Ebbe idmo waxtarka ay leedahay ama faa´idada ay leedahay dacartu (Aloe vera) oo muddoonyinkii danbe aad ugu soo badanaya suuqyada lagu iibiyo dawooyinka dadbiiciga.
Hadaan milicsano milicsano taariikhda is dawaynta la isku daweeyo dawooyinka dabiiciga ama aan si kale u dhigee dhirta la isku daweeyo. Tan iyo wakhtigii/markii Ilaahay (swc) dhulkan dushiisa ku abuuray bini-aadamka, ee ay ugu horreeyeen Xaawa iyo Aadam. ilaa imminka waxay ummadihii kala duwanaa ee intaasoo kun oo sannadood nolosha aduunka iskaga kala danbeeyey ay isticmaali jireen dawooyinka u gaara oo ay samaysan jireen, si ay iskaga daaweeyaan xanuunada ama cudurada soo food saara jirkooda. Dadka soomaalida ayaa ah dadka iyagu inta badan isticmaala dawiiyinka dabiiciga,khaasatan dadka reer miyiga oo aad ugu xeeldheer isticmaalka dawooyinka dabiiciga.
Magaca guud waa geedka dacarta, laakiin dacartu waxa ay u kala baxdaa noocyo badan. Haddaba marka laga hadlayo waxtarka ay leedahay dacartu waxaa ka mid ah
1- In ay finanka baabi´iso
2- Waxa ay yaraysaa cuncunka/xanuunka maqaarka jirka
3- Waxa ay dawaysaa xanuunka dheefshiidka caloosha
4- waxa ay dacartu u wanaagsan tahay oo loo isticmaali karaa gubashada, nabarada jirka, cuncunka, dhagaxaanta kalyaha.
5- Waxaa la yiraahdaa waxa ay u fiican tahay Kansarka.
6- Waxa kale oo ay u wanaagsan tahay qaniinyada kaneecada